K: ၂၁ ဗားရှင်း ကျမ်းစာ
(ကိုးကား - ယာ ၃း၆ )
God must be busy :)
anyway, that's the good imagination
ဘာတွေ ဒီလောက် လုပ်နေတုန်း မကေ..း)
အဲဒါ ပဲလေ.၂၁ ရာစု စတိုင်..
လောလောဆယ် အလုပ်များများ လုပ်နေရတာပဲ ကျေးဇူး တင်လိုက်အုံး...း)
တကမ္ဘာလုံး .. အလုပ်လက်မဲ့ တွေ များနေတာ..း)
ဘုရားသခင်တောင် ကိုယ်ရေးသမျှ ကိုယ်ပြန်ပြန် ရှင်းပြနေရတဲ့ ဘဝရောက်တော့မယ် .. ၂၁ရာစု။ ဒီလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ အမရယ်။ ဟားဟား။ တော်တော် သဘောကျသွားတယ်။ :D Cheer!
Microsoft Windows နဲ့
Holy Bible နဲ့ ...
Windows ကိုတော့ update လုပ်ပေးရပါတယ်။
ဘာလိုလဲ ဆိုတော့ Security Hole တွေ
Holy Bible ကတော့ Security Hole တွေ မရှိဘူး ထင်ပါရဲ့။
ဘုရားသခင်က ပင်စင်ယူသွားပြီး အမရေ :)
တို့ကတော့ ပါးစပ်တွေပဲ ပြောနေတာ တွေ့တာပဲ။ လေပိနေလို့ လက်တွေ့မှာ ဘာမှ ဖြစ်မလာလို့ ဘုရား လက်မှိုင်ချ နေသလားလို့.. :)
ဘုရားရှင်က ကိုးနတ်ရှင် မကောင်းသေးလို့ ဗါရှင်းအသစ် အွန်လိုင်းကနေ upload မလုပ်ဖြစ်သေးတာတဲ့...K ဆိုတာ တလုံးထဲပဲရှိလို ၂လုံး ၃လုံး ဆို အတော် ဦးနှောက်စားမယ် ထင်ရဲ့။
The tongue isafire,aworld of evil. James 3:6
The dumb Comment on blog is fire,aworld of evil. James 3:6 (New Version)
blog မှာ မယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေများလာလို့အစ်မရေ ...။
ဘုရားသခင်လည်း အခုတလောသိပ်ပျော်နေတယ် ...။
စီးပွားရေးကမကောင်းတော့ ခရစ်ယာန် တော်တော်များများက ဘုရားကျောင်းဘက်ပြန်လှည့်လာတယ် ...။
Retrench ထိသွားတဲ့ သူတိုင်း ၊ bankrupt ဖြစ်သွားတဲ့ သူဌေးတိုင်း က
Oh God, .... O my GOD ... တွေ ရွတ်လွန်းလို့ ... ခဏခဏ ငုံ့ကြည့်နေရတယ် ...
နောင်လည်း မကြာမကြာ financial crisis တွေ ဖန်ဆင်းဦးမှလို့တော့ မတွေးနေလောက်ဘူးလို့ထင်ပါရဲ့ ...။
ကဗျာကို နှစ်ခြိုက်စွာ ခံစားသွားပါတယ်။
ဘုရားသခင် အလုပ်ပြုတ်နေတယ်ဆိုလားပဲ :P
အစ်မ အဲလောက်တောင်အလုပ်ရှုပ်နေပြီလား။ ကူလုပ်ပေးရဦးမလား။ :P
စိတ်ကူးပေါက်စာသားများကို မှတ်ချက်ပေးသွားသူများအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လျှာအလုပ်ပါး လက်အလုပ်များတဲ့ခေတ်တဲ့.. အဟိ.. ဟုတ်ပါ့အန်တီ.. ;)
လျှာက အလုပ်ပါးဆိုအရိုးမရှိလို့ ထင်တယ်။ အဟိ။
လျှာရဲ့ အလုပ်ကလည်း စားမယ် ၀ါးမယ် ဒါပဲကိုး။
ကဗျာလေးရော နာမည်ပေးတာလေးပါ နှစ်ခြိုက်မိတယ်…